Jabra Elite 45h, shamwari yakakwana ye teleworking [KUDZIDZA] | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 01/05/2021 12:00 | Yakagadziridzwa ku 29/04/2021 13:16 | General, Reviews
Telework Iko pano kugara uye kuri kupinda munzira yedu yekuona zvinhu, zvekuti vazhinji vedu takasarudza kumisikidza hofisi diki mumba medu uye takaona kukosha kwemagadhi muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. .
Jabra inyanzvi yekupa zvigadzirwa zvine mutsindo nemavhidhiyo emisangano yemarudzi ese evashandisi uye panguva ino ticha tarisa pachigadzirwa chakasiyana-siyana. TOIsu tinotarisa zvakadzama paJabra Elite 45h pamusoro-nzeve mahedhifoni, yakanakira kufona nekuita neruzivo rwekutanga, vadzidze pamwe nesu.
3 Kubatana uye kuzvitonga
4 Ruzha rwemhando uye ruzivo rwevashandisi
Sezvaunenge uchitoziva, Jabra ikambani inowanzo gadzira zvigadzirwa zvine mhando yepamusoro yepamusoro, ndizvo chaizvo chiitiko chatinoona neichi Jabra 45h. Nezve kurongedza, kambani inogara ichibhejera pane minimalism uye yakasarudzika maindasitiri unboxing system iyo inotiudza isu zvisingaite. Chinhu chekutanga chinotishamisa kana tichivaburitsa mubhokisi kureruka kwavo kwakanyanya uye nemavakirwo avanonzwa, hunhu uhu hunovaperekedza mukushandisa kwezuva nezuva. Iyo yakanaka millimeter yekugadzirisa system pasina creaking uye ne "pamusoro-nzeve" nzeve dzinotomesa.
Mavara aripo: Dema, Dema + Mhangura, Beige, Bhuruu, Bhurauni, Dema + Space Grey
Iine zvakawanda zvekuita nenyaya yekuti iyo headset inogadzirwa neyekugadzira yeganda uye iyo padding ndeye memory furo, nechinoratidza «L» uye «R» yakaboora yakananga mavari. Isu tine huremu hwakazara hwemagiramu zana nemakumi matanhatu chete, chimwe chinhu chinoshamisa, ichifambiswa nehuremu hwakadzora. Ehe, bhokisi rinounza tambo yeUSB-C iyo inoshandiswa kuchaja chishandiso uye haina kureba masendimita makumi matatu pakureba, izvo zvakatisiira isu kunzwa kunorwadza tichifunga kuti mahedhifoni pachawo anenge masendimita makumi maviri pakureba pakazara.
Isu tinoenda takananga kune yega yega maspika, zvese kurudyi uye kuruboshwe zvine hupamhi hwemamirimita makumi mana, izvo zvisina kushata zvachose. Ose ane kupfeka kurira nemhepo ruzha izvo zvichatibatsira kuita hurukuro uye kuteerera mimhanzi nemazvo kunyangwe kunze, chimwe chinhu chatakatenda kuti chinoshanda nemazvo. Izvo zvinoitika neruzha mukufona, ine maikorofoni maviri anotarisira kunatsiridza mashandiro ezwi redu uye nekudaro kuve nechokwadi chekuti iye anogamuchira anonzwa nemazvo zvese zvatiri kuda kuburitsa.
Mimhanzi mutauri bandwidth: 20 Hz kusvika 20 kHz
Kutaura mutauri bandwidth: 100 Hz kusvika 8000 Hz
MaMEMS mamaikorofoni maviri
Bluetooth ine maviri maviri panguva imwe chete
Zvinotoshamisa kuti, uye kusiyana nemamwe mabhureki, iyo femu inosimbisa kuti chishandiso ine waranti yemakore maviri pamberi pemvura uye guruva pawebhusaiti yavo, chimwe chinhu chakandishamisa. Muchikamu chino zvidiki zvinogona kudikanwa zvehunyanzvi zveJabra 45h izvo zvakavakwa nemasimba epamusoro-simbi senge adonized aluminium uye silicone ine isiri-tsvimbo mafuta. Ichokwadi ndechekuti kushandiswa kwezuva nezuva kunoongwa nekuda kwekuwedzera kuramba izvo zvese izvi zvinopa.
Kubatana uye kuzvitonga
Kubatana kunozobva pane MAKARALI USB 5.0 mune ino kesi, neese anodiwa masitifiketi echinangwa ichi. MaBluetooth profiles akakosha pakuteerera mimhanzi uye pano tinozviwana isu semunhu mukuru asipo kuQualcomm's apt codec, Zvisinei, isu tine izvo zvakajairika kubva kuApple uye nemamwe makambani: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2.
Bhatani rakazvitsaurira kukumbira Alexa, Siri, Bixby kana Google Mubatsiri.
Kana ari kuzvitonga, Isu hatina data rehunyanzvi padanho rebhatiri kugona mu mAh. Zvichakadaro, iyo femu inotivimbisa kusvika kumaawa makumi mashanu emimhanzi, chimwe chinhu chatakakwanisa kuongorora icho chiri padhuze nekuita chaiko kwemahedhifoni. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti USB-C chiteshi chine mhando ye "inokurumidza kubhadharisa" iyo ichatibvumidza isu maawa gumi ekuzvimiririra nemaminetsi gumi nemashanu ekuchaja, kunyangwe tichifunga kuti iyo yakazara yekuchaja nguva ine 5W USB-C adapter iawa rimwe nemaminitsi makumi matatu, zvinoita kunge zvakafanana nemutero wakajairwa. Vane "sleep mode" inozoitwa otomatiki kusimudzira mashandiro ebhatiri patinenge tisingavashandise uye nekudzima otomatiki mushure memaawa makumi maviri nemasere pasina kushandiswa.
Ruzha rwemhando uye ruzivo rwevashandisi
Sezvazvinowanzoitika nezvigadzirwa zveShure, isu tinowana yakamisikidzwa zvakanaka headset. Iwo mabass haana kumira zvakanyanya uye isu tinogona kusiyanisa mhando dzese dzetoni, ehe, zvakakodzera kutaura kuti isu hatigone kukumbira kupfuura mamwe mahedhifoni mumutengo wayo wepakati. Muchokwadi, iko kungodzima ruzha kugona kwemahedhifoni kunoshamisa kwazvo tichifunga kuti ivo "vanopfuura-nzeve" uye havanyatsovhara nzeve yedu.
Maikorofoni anoshanda zvakanyatsonaka kwekutaurirana kwenguva refu, uye zvakare anoparadzanisa ruzha rwekunze runogona kukanganisa kana kukanganisa mafoni. Aya mahedhifoni ane huremu hwakareruka uye kuzvitonga kune hutsinye kunotikurudzira kuti tifunge kuti inogona kuita sarudzo huru patinotaura nezve kufona. kana kupedza maawa akawanda muhofisi usingatyi kutora runhare. Hazvikonzere kuneta kana munzeve kana mumusoro nekuda kwehuremu uye zvinhu zvavo zvakanyanyisa kwazvakarerekera uye inopokana, chimwe chinhu chandinofunga chandinofanira kuratidza mune ino ongororo.
Sezvatakambotaura, kana iwe uchida kutiza kubva kumaTWS mahedhifoni kana uchishanda kana kushandisa mazuva akanaka ehofisi usingaregi kufona, idzi Jabra Elite 45h chipo chinonakidza kwazvo mumakwikwi emitengo. Unogona kuzvitenga zvisingasviki 99 euros pazvitoro zvakajairwa seAmazon. Ini handigoni kubatsira asi rangarira kuti isu hatina aptX uye isu tinogona kuvapotsa, pamwe neicho chikonzero chekuti nekuda kwechimwe chikonzero chandisinganyatsonzwisisa ivo vafunga kuita vasina 3,5mm Jack chiteshi chekuwedzera kubatana kwechinyakare.
Yakatumirwa pa: May 1 we2021
Dhizaini isingagadzike uye yakasununguka
Ruzha rwakanaka kwazvo
Mutengo wakatsiga mutengo
Mabhatani ane kunetsa kubata
Tambo ye30cm USB-C
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Jabra Elite 45h, shamwari yakakwana ye teleworking [KUTAURA]
Fresh'n Rebel Duo Base, dhizaini uye kuita kwakawanda neasina waya kuchaja